कसरी पातलो कपाल बलियो बनाउन?
दुर्भाग्यवश, वातावरण हाम्रो कपाल को राज्य मा एक हानिकारक प्रभाव छ। साथै, सबै भन्दा महिला नियमित रूपमा विभिन्न माध्यम स्टाइल प्रयोग, एक हेयर ड्रायर वा संडसी संग स्टाइल बनाउन। यो सबै पातलो कपाल सुख्खा र भंगुर बन्न भन्ने तथ्यलाई तिर जान्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, कपाल को घनत्व आनुवंशिक को अवधारणा छ, र यसरी artificially वृद्धि बाल follicles संख्या असम्भव छ। तर, हामी समय सुहाउँदो सुदृढ त्यसैले महिला कर्ल द्वारा प्रिय हेरविचार गर्न सक्नुहुन्छ। सबै को पहिलो, यो "भित्र" पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक छ, कि बिजुली आपूर्ति प्रणाली, भिटामिन को एक पाठ्यक्रम प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउने एउटा विशेष पेय परिवर्तन हो। त्यसपछि, पातलो कपाल बलियो र चमकदार हुनेछ। आफ्नो कार्यहरू लागि अर्डर लाभ मा, चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् गर्नुपर्छ। छोटो सर्वेक्षण पछि डाक्टर-trichologist पाठ्यक्रम सुधार नियुक्त गर्नेछ। नियम, धेरै राम्रो कपाल तपाईं विभिन्न पोसिलो र मइस्चराइजिंग मास्क गर्न समय र प्रयास को धेरै खर्च गर्न त, दुवै आन्तरिक र बाह्य को आपूर्ति आवश्यक छ। तर प्रभाव निश्चित लागि खुसी हुनेछ।
पातलो कपाल: घर उपचार
धेरै cosmetologists अझै पनि परम्परागत उपचार प्राप्त यो समस्या को छुटकारा मदत गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्छन् महंगा सैलून प्रक्रियाहरु भन्दा झन् खराब छ। र यो घर बनाएको मास्क को आधार ठीक चोट छैन भनेर प्राकृतिक सामाग्री हो किनभने, जायज छ। त्यसैले, विकास बढावा र तपाईं नियमित exfoliation र बनाउन आवश्यक कपाल बलियो बनाउन टाउको को मालिश। समुद्र नुन (ठीक पीस) अरंडी, अलसी वा burdock तेल दुई चम्मच संग मिश्रित को एक सानो राशि, कागति को रस को एक spoonful थप्नुहोस्। परिणामस्वरूप slurry खोपडी लागू र कोमल परिपत्र आन्दोलनहरु संग massaging थियो।
धेरै पातलो कपाल, विशेष नियमित staining उजागर गर्दै छन्, स्थिर मइस्चराइजिंग र सुदृढ गर्न आवश्यक छ। पुनर्स्थापना गर्न कपाल को संरचना तेल आधारित मास्क को एक शस्त्रागार प्राप्त गर्न आवश्यक छ। आवश्यक तेल लामो आफ्नो चमत्कारी गुण लागि ज्ञात गरिएको छ। एक आधार रूपमा जैतून, burdock, अरंडी, सिफारिस गरिएको छ अलसी तेल। प्रभाव बृद्धि गर्न आवश्यक केही घटेको आधार थपियो गर्नुपर्छ, उदाहरणका लागि, लैवेंडर तेल, सुन्तला वा Rosemary। केश मार्फत गर्मी को रूप मा हुनुपर्छ यो मास्क लागू हुन्छ। घण्टा केश मात्र दुई भिगो, तर हप्ताको एक पटक, तपाईं रातारात मा तेल छोड्न सक्नुहुन्छ।
साथै, ध्यान कपाल को हेरविचार, विशेष गरी शैंपू गर्न दिनुपर्छ। विशेषज्ञहरु, प्राकृतिक सामाग्री समावेश छ भनेर मात्र जैविक कस्मेटिक प्रकृति, प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं। हाल, कस्मेटिक्स को निर्माताहरु कुनै एक उपयुक्त उपाय फेला पार्न सक्छन्, एक विस्तृत मूल्य दायरामा उत्पादनहरु को एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्ताव। पातलो कपाल हर्बल decoctions संग rinsing मार्फत बलियो हुन सक्दैन। उदाहरणका लागि, खैरो सुट nettle, स्टेटजोन्स wort वा ओक छाल, गोरो महिलाहरु - chamomile, कैलेंडुला र रातो कपाल लागि राम्रो।
टाउको shaved बालिका: haircuts सुविधाहरू, र बेफाइदा
हरेक दोब्र्याइएको मा स्त्रीत्व - कर्ल सिर्जना मेसिन
यौन gerpis: लक्षण, निदान, उपचार
Soils को समूह को वर्गीकरण
होटल Carelta बीच Resort र स्पा4* (Kemer, टर्की): विवरण, फोटो, समीक्षा
बच्चाहरु को लागि मोशाको वा छोराछोरीको खिलौने को सबै
प्रोग्रामर कसरी पाउने
आज यो सम्भव छ भनेर सुन्न: अनलाइन रेडियो सूची?
अचम्मको काइट उडान